बलिउडमा सनी लियोनीपछि अर्की पोर्नस्टारको इन्ट्री ! को हुन् यी पोर्न स्टार? (भिडियो सहित) — onlineakhabar.com
प्रकाशित : पौष २७, २०७४ | २८२ पटक हेरिएकोसमाचार
मुम्बइ। पोर्नस्टारको रुपमा चर्चित भइसकेपछि त्यो संसारलाई चटक्कै छाडेर बलिउड भित्रिएकी सनी लियोनीले बलिउडमा निकै सफलता पाइरहेकी छिन् । सनीको सफलतासँगै अब बलिउडमा अर्की पोर्नस्टारको आगमन हुने भएको छ । पोर्नस्टार मिया माल्कोवा बलिउड प्रवेश गर्न लागेकी हुन् ।